Rouz Lesli - actress abadumile, owazalelwa eScotland. She - umnikazi ukubukeka atypical, okuyinto umane abakwazi ukushiya ubani ngabandayo. Leslie ngokuyinhloko aziwa yokuthi co-izinkanyezi ku ethandwa uchungechunge TV "Game of Thrones" nokuthi ngemva kokwamukela udumo ngamazwe. Manje kuyabonakala hhayi kuphela ochungechungeni ethandwa, kodwa futhi esikrinini esikhulu, lapho livela khona njalo isimanga.
Rouz Lesli wazalelwa e-Aberdeen, esemgwaqweni inhliziyo Scotland. Rose umndeni has a lozalo eside, futhi amalungu aleli clan abangu izibalo zezombusazwe kanye yomphakathi hhayi kuphela e-UK kodwa futhi kwamanye amazwe omhlaba owawaziwa. Rose wahlala inxuluma umndeni, eyakhiwa ngekhulu nanhlanu, kanye abazali bakhe nezingane zakubo.
Ethola iziqu esikoleni esingesona esikahulumeni elise e Somerset, bese libhaliswe engcono yaseshashalazini Academy yezwe, etholakala e-London. Ngemva kokuthweswa iziqu, Rouz Lesli wathola i-diploma esiqinisekisa ukuthi unakho iziqu ze-bachelor kwezobuciko.
Rouz Lesli: Filmography
Ekuqaleni actress Scottish idlalwe kuphela yaseshashalazini ngaleso Theatre Academy. Rouz Lesli uqala ukuvela esikrinini in the movie "Banged Up Abroad" futhi ngemva kwalokhu indima uye yabakhanga labaqondisi amaningi aseBrithani. Ngemva konyaka, yena okunenkanyezi "Idolobha okusha", indima eye ukhishwa Scottish Award. Ukunquma ukungahlali ngicabanga kuphela umkhakha ifilimu, Leslie seziqalile ukusetshenziswa wakhe e-London yaseshashalazini, lapho wadlala kudlala ambalwa, bese enquma ukubuyela ebhayisikobho.
Rouz Lesli wathumela izithombe zabo ukuba auditions ahlukahlukene, waqhubeka nokulalela kuze kube ilapho ivunyelwa ochungechungeni omusha "Downton Abbey" bese ngenxa indima "Game of Thrones" chungechunge. Kwaba amaphrojekthi ebaluleke ngempela, ethandwa hhayi kuphela e-UK nasemhlabeni wonke, ngakho ukuthandwa Leslie washesha ngokwanele. Ngemva kwalezi izindima ezimbili ephezulu iphrofayela amaphrojekthi umsebenzi intombazane basungula ngokushesha kakhudlwana. Ukunikezwa baqala ukuza ngemva kwenye, futhi uRose waba omunye abadlali ethandwa kakhulu e-UK.
Manje Rouz Lesli - actress abasha futhi ohahela isikhundla nge ukubukeka atypical. abaqondisi abaningi emhlabeni wonke ofuna ukusebenza, ngakho njalo ukunikela intombazane izindima ezihlukahlukene amaphrojekthi ezinkulu. Rose kungabonwa hhayi kuphela amafilimu nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini, wenza eNgilandi, kodwa futhi ngayo emafilimini aseHollywood ezifana "The Last Witch Hunter." Kuyinto kule isethi ifilimu umlingani Leslie kwaba umdlali wamabhayisikobho owaziwayo Vin Diesel.
Rouz Lesli ungaphakathi ubuhlobo nge umlingisi British Kit Harington, nabo bahlangana ku isethi "Game of Thrones" uchungechunge TV ngo-2011. Njengoba kuphawuliwe wayevame Kit Harington, e Leslie, lapho aqala khona ukuthandana lapho uwubona okokuqala. Ipheya eside ezifihlakele ubuhlobo babo bezothando, kodwa namanje babaqinisa ngo-2016, uvele ndawonye ngesikhathi sehlakalo somphakathi.
Ukudlula Madagascar umdlalo. Amacebo eziwusizo
Oatmeal - isithako umlingo oat hlamvu ezempilo nobuhle
"Ulan Udestalmost" - ibhizinisi nokwethenjelwa based